Jwxo-shiil, oo u Goodiyey Jaango, Isana Iska Waabiyey – Rasaasa News
May 31, 2010 Jwxo-shiil, oo u Goodiyey Jaango Isaga oo Islahaa Goojo Kuma Jirto
Intiina la socota iyo inta aan la soconba kooxda Jwxo-shiil, ayaa kolkii ay ku hongowday dadweynahii ay hantida ka qaadi jirtay bilowday in ay koobo daba qaadato afmaalada ka xoogsada bulshada kolka ay madadaaliyaan.
Jaango, oo ka mid ah afmaalada u dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya ayey irsaaqadu u gashay ururka ONLF, kolkii uu ururka ahaa. Waxaana uu samaystay koox gabdho iyo wiilal leh isaga oo alifa riwaayado si ay dadka u madadaaliyaan iyana ay shaqo ugu noqoto.
Runtii, Jaango wuxuu isku dubo riday koox dhamaystiran, waxaana uu arintaas la kaashaday fanaaniin waaweyn oo Somali ah. Nasiib daro waxaa dabo dhigtay Jwxo-shiil oo Eebahay ku aafeeyey olol oo aan wax lacag diiqsiin karaba uusan jirin. Jaango mudo dheer ayuu iska xishoonayey oo uu dhalinyarada dhidida ku sasabayey rag dhaawac ah ayaynu caawa kharajkii riwaayada ugu deeqnaye raali ahaada.
Hadaba, waxaa xili dhawayd uu Jaango martiqaaday Saado Cali Warsame in ay tagto dalka Ingriiska si ay ugala qayb gasho riwaayad lagu dhigayey magaca halganka. Kolkii ay Tagtay garoonka Heathrow oo ay ku soo dhawaynayeen dad ay isku reer yihiin ayuu Jwxo-shiil ku soo dhexdarsaday afar haween ah iyo uufanays Tamuujo, waxayna madaxa Saado ka saareen Calanka ONLF ee uu bahdilay Jwxo-shiil.
Arinkaas daraadii ayey todobaad ka dib u dhinteen 10 ruux u dhashay gabalka Sool. Waxaa kale oo dhacday in kharajkii Riwaayada uu Jwxo-shiil jeebka ku shubto, sidaasi daraadeed ayey Saado u diiday in ay habeenkii xigay dhigto Riwaayada.
Jwxo-shiil ceebaale, ayaa ka cadhooday diidmada Saado, wuxuuna canaan fool xun oo bahdil ah canaantay Jaango, oo uu islahaa waa hore ayaad ka adkaatay. Jaango oo ciil hore u karaar dhaafsanaa ayaa jawaab kulul siiyey isaga oo ku yidhi “meel walba waad ku jirtaaye hadaad lacag dooni in aad riwaayad ka samayso gabdhahaaga fanaaniin ka dhigo”. “Jabhada aad sheegi waa hore ayaa ugu dambaysay jabhadnimo ee waan ku ognahay oo waad ku xoogsataaye mardambe saadkayga ha soo galin.”
Jwxo-shiil, wuu yaabay sababta oo ah ugama baran Jaango calool adaygaas wuxuuna garwaaqsaday in wax jiro madaama uu rag badan oo ay Jaango isku reer yihiin uu dilay lana diri karo. Kolkaas ayuu Jwxo-shiil ku turaabay haa Dr. Dolal ONLF buu ahaa, Liqowe Kaalinka 5aad buu ahaa, Ina Aaardoon Bulxan waa horeeyey iyo kuwo hore.